Timo Werner oo shaaca ka qaaday sababta uu u doorbiday inuu u ciyaaro Chelsea marka loo eego Liverpool – Gool FM
Liverpool oo noqotay kooxda ugu cad cad ee ku guuleysan karta saxiixa xiddiga PSG ee Kylian Mbappé
“Waxaan ka mid ahay ciyaartoyda loogu neceb yahay kubadda cagta” – Jordi Alba
Ferdinand oo ka hadlay shaqsiyada Thomas Tuchel, kaddib markii lala xiriiriyay inuu noqonayo badelka Lampard ee kooxda Chelsea
“Uma maleynayo in Frank uu doonayo inuu ila hadlo” – Mourinho oo ka hadlay go’aankii lagu ceyriyay Lampard
Horudhac: West Bromwich Albion vs Manchester City… (Sky Blue oo caawa doonaysa inay la wareegto hoggaanka horyaalka Premier League)
Horudhac: Southampton vs Arsenal… (Saddex maalin kaddib markii Gunners laga soo reebay FA Cup-ka, Saints oo markale kulan horyaalka ah qaabilaysa Kooxda Arteta)
RASMI: Chelsea oo ceyrisay Frank Lampard… (Waa kuma baddelkiisa?)
Macallin Frank Lampard oo maanta laga cayrinayo Chelsea kaddib markii ciyaartoyda Kooxda…
“Ma faraxsanaan lahayn haddii aan ku jiri lahaa booska Van de Beek!.” – Bruno Fernandes
Guardiola oo sheegay inuu rajeynayo in xiddig ka tirsan Man City uu baxayo dhamaadka xilli ciyaareedkan
Timo Werner oo shaaca ka qaaday sababta uu u doorbiday inuu u ciyaaro Chelsea marka loo eego Liverpool
Dajiye September 16, 2020
(London) 16 Sebt 2020. Xiddiga reer Germany iyo kooxda Chelsea ee Timo Werner ayaa shaaca ka qaaday sababaha uu u doorbiday inuu u ciyaaro Blues halkii uu ku biiri lahaa Liverpool.
Hadalka Timo Werner ayaa yimid kaddib shir jaraa’id uu ka soo muuqday maanta oo Arbaco ah, kahor kulanka Chelsea iyo Liverpool ee Axada soo socota, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Markii aan go’aansaday inaan ka tago RB Leipzig, waxaan la hadlay kooxo kala duwan, sida Liverpool, oo heysata ciyaartooy aad u fiican”.
“Laakiin ugu dambeyntii waxaan go’aansaday inaan ku biiro kooxda Chelsea, kaliya maahan qaabka ay kubadda cagta u ciyaaraan, balse sidoo kale sababta ayaa waxay tahay waxa ay i tusiyeen”.
“Waan jeclaa inaan ka ciyaaro RB Leipzig, laakiin waxay ahayd mid aad muhiim iigu ah inaan imaado koox leh aragti ku habboon habka aan u ciyaaro kubadda cagta, dhamaan Premier League-ga waxay u ciyaaraan sida aan u ciyaaro oo kale”.
Si kastaba ha noqotee, Timo Werner ayaa waxaa soo jiitay doorka uu ka ciyaaray Frank Lampard imaatinkiisa kooxda Chelsea, isagoo ka dhaadhiciyay inuu ku biiro Blues, wuxuuna sharxay in Lampard uu si joogta ah kala soo xiriiri jiray taleefankiisa, si uu ugu qanciyo imaatinka garoonka dhaca Galbeedka London ee Stamford Bridge.
Pep Guardiola oo kula dagaalamaya kooxda Roma saxiixa xiddig ka ciyaara horyaalka…
Ronald Koeman oo ka hadlay mustaqbalka Luis Suarez ee kooxda Barcelona